आफ्नो बोअजको प्रतिक्षा गर्नुहोस!! - Nepali Christians Site
आफ्नो बोअजको प्रतिक्षा गर्नुहोस!!
Posted by srijana gurung on August 4, 2013 at 7:30pm
ख्रिष्टियन परिवारमा जन्मेकी जवान युवती, राम्री छिन, पढेलेखेकी छिन, केही गर्छु भन्ने जोस छ, जाँगर छ तर अविश्वासी विवाहित युवकसँगको प्रेममा पर्छिन। दुबैजना घरपरिवार बाट टाढा, कसैको छेकबार छैन, अत:बिबाह पूर्वनै साथ रहन्छन, गर्भ रहन्छ, गर्भ फाल्छन् (जुन जघन्य अपराध हो) अनि एकदिन ति युवक उनलाई छोडेर पुन आफ्नो श्रीमती तर्फ फर्कन्छ। आखिर उसको श्रीमती हो, बिबाह गरेर लेराएको , माया त लाग्छ नै आफ्नी श्रीमती अनि बालबच्चाहरुको तर यी सबैको दलदलमा फ़स्छिन ति युवती अनी उनि बिस्तारै डिप्रेसनको शिकार बन्न पुग्छिन।
इसाई महिला र पुरुषको सन्दर्भमा बाइबलले सामान्यतया दुई बुदाँहरुलाई इङ्गीत गर्दछ; या त ख्रीष्टमा उनीहरु दिदि-बहिनि दाजुभाई हुन्छन वा त श्रीमान-श्रीमती हुन्छन। यी बाहेक इसाई पुरुष र महिलाबीच ''बिचको सम्बन्ध'' भन्ने हुदैन। भविष्यमा हामी बिबाह गर्दैछौ अत: बिबाहित जोडीले गर्ने ५० प्रतिशत कार्य हामी गर्न सक्छौ भन्ने सोच सरासर झुट हो। चाहे जे सुकै होस् तर बिबाह पूर्व गरिने यस्ता अनुचित कार्यलाई बाइबलले पाप भन्दछ। बिबाहपूर्वको शारीरिक सम्बन्ध पनी त्यतिनै मात्रमा गलत छ जती गलत व्यभिचार तथा अन्य अनुचित कार्य गर्नुमा छ। यस्ता कार्यको समर्थन बाइबल कदापी गर्दैन किनभने यी सबमा तपाईको सम्बन्ध एउटा यस्तो व्यक्तिसँग हुन्छ,जो कुनै पनी रीतिले तपाइको पती होइन या भईसकेको छैन।पती र पत्नीको सम्बन्धनै परमेश्वरको नजरमा ग्रहणयोग्य छ।सबैको बीचमा बिबाहचाहिँ आदरणीय होस्,बैबाहिक सम्बन्ध नबिटुलिओस्,किनकी दुराचारी र ब्याभिचारीहरुको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हिब्रु १३:४
माथी उल्लेखित घटनामा युबक र युबतिको सम्बन्ध नाजायज भएकै कारण आफ्नो सन्तानको भ्रुणहत्या उनीहरुले गरेका थिए। उनीहरु जान्दथे उनीहरु गलत छन् ,तर कालोलाई गोरो बनाउने जिद्दीमा आफ्नै सन्तानको हत्या गरेर पापको दलदलमा फसे। हो,यस्तै पाप गर्नबाट परमेश्वर हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले त उहाँ बिबाह पूर्वको सम्बन्धलाई मान्यता दिनुहुन्न तर दुखको कुरा आफ्नो संसारिक अभिलाषाको कारण हामीहरु यति अटटेरी बन्छौ कि उहाँको बचन जानेर पनी अन्जान बन्छौ, देखेर पनी अन्देखा गर्छौ अनि सजिलै शैतानलाई मौका दिन्छौ। हामीले हरदम याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, जसरी परमेश्वरसँग हाम्रो जिबनको निम्ति सुन्दर योजना हुन्छ त्यसरी नै शैतानसँग पनी हाम्रो जिबनको निम्ति योजना हुन्छ, पापको दलदलमा धकेल्ने। कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने यो हामी आफैमा निर्भर पर्छ। यसैले प्रार्थना गरौ ताकी हामी परीक्षामा नपरौ। अनी जसरी रुथले धैर्यपुर्बक बोअजको प्रतीक्षा गरिन, त्यसरी नै आफ्नो बोअजको प्रतीक्षामा प्रतीक्षरत तपाईपनी धैर्यवन रहनुहोस्, अबश्य पनी परमेश्वरले तपाईमाथी आशिषको झरी खन्याउनु हुनेछ। ''...तिमिहरुमाथी अनुग्रह गर्न परमप्रभु इच्छा गर्नुहुन्छ। तिमीहरुमाथी दया देखाउन उहाँ उठ्नुहुन्छ, किनकी परमप्रभु न्याय गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतीक्षा गर्ने सबै धन्यका हुन्।'' यशैया ३०: १८ रुथ एक मोआबी स्त्री तर हरेक असल नारीमा हुनुपर्ने गुणहरुले परिपूर्ण थिइन्। आफ्नो पती र छोराहरुको मृत्यु पश्चात जब नाओमीले आफ्नै देश फर्कने निर्णय गरिन, तब उनका दुवै जना बुहारीहरू ओर्पा र रूथपनी उनको पछि लागे। नाओमीको सम्झाई बुझाई पश्चात ओर्पा आफ्नै देश मोआब फर्किन भने रुथले उनिसँगै जाने जिद्दी गरिन। रुथले जबाफ दिइन्, ''मलाई फर्केर जान र तपाईलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाई जहाँ जानुहुन्छ म पनी त्यहिँ जानेछु।तपाई जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहिँ नै बस्नेछु। तपाईका मानिसहरु मेरा मानिसहरु हुनेछन,अनि तपाईक परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन। तपाई जहाँ मर्नुहुन्छ म पनी त्यहिँ मर्नेछु,र त्यहिँ नै गाडिनेछु।मृत्युबाहेक अरु कुनै कुराले तपाई र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले म सँग अति पनि कडा ब्यबहार गरुन। रुथ १ :१६-१७'' यसरी आफ्नो पतिसँग रहदा सिकेको बाइबलका कुराहरु आफुले राम्रोसँग बुझेको कुरा आफ्नो ब्यबहारबाट रुथले प्रष्ट पारिन्। साथै संसारिक कुराहरुबाट अलग रहने उनले दृढ आत्मिकी निर्णय गरीन् र आफ्नी सासुको साथ नछोड्ने संकल्प गरिन। हामीलाई सानै देखि सिकाइन्छ, सासूलाई पनी आफ्नी आमालाई जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ भनेर तर एक दुई घर छोडेर बाकी सबै घरहरुमासासु-बुहारीको झगडा हुने गर्दछ। बुहारीहरु सासूलाई आफ्नी आमालाई जस्तै ब्यबहार गर्छन र आफुलाई पनि आफ्नी सासुले आफ्नै छोरी सरह ब्यबहार गरुन भन्ने उनीहरु चाहन्छन। नि:संकोच यो नराम्रो कुरा होइन तर ''छोरी र आमा'' बन्ने चक्करमा ''सासु-बुहारीको'' सम्बन्ध नै धरापमा पर्न जान्छ। बुहारीको गुनासो हुन्छ, जतिसुकै राम्रो ब्यबहार गरेपनी, आफ्नै आमालाई जस्तो स्याहार-सुसार, मान-सम्मान गरेता पनी उनको सासु सधै उनको आफ्नै छोरीको कुरा सुन्छिन अनि सासुको गुनासो हुन्छ, जतिसुकै माया दिएता पनी उनको बुहारी उनको आफ्नै आमालाई बढी मान-सम्मान गर्छिन। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्नें कुरा के हो भने ति सासुको पनी आफ्नै छोरी हुन्छ अनि ति बुहारीको पनी आफ्नै आमा हुन्छ। न त सासूलाई छोरीको खाँचो छ न बुहारीलाई आमाको खाँचो छ। खाँचो छ त सासुलाई केवल एक असल बुहारीको अनि बुहारीलाई एक ममतामयी सासुको। के बुहारीले बुहारी नै बनेर आफ्नी सासूलाई अगाढ प्रेम गर्न सक्दिनन र? के सासुले सासु नै बनेर आफ्नी बुहारीलाई प्रेम दिन सक्दिनन र? अबश्य पनी सकिन्छ नि ,तब छोरि बन्ने चक्करमा किन बुहारी ओझेलमा पर्नु या आमा बन्ने चक्करमा सासु किन ओझेलमा पर्नु। सासु-बुहारीको सम्बन्ध पनी त्यतिनै प्रगाढ हुनसक्छ जति प्रगाढ आमा-छोरीको हुन्छ। अझ यसो भनौ, सासु-बुहारीको सम्बन्ध आमा-छोरीको भन्दा पनी प्रगाढ हुन सक्छ यदि त्यसलाई निभाउन जान्ने हो भने। यसको अनुपम उदाहरण हामीले रुथ र नाओमीको जिबनमा पाउँछौ। अत: जसरी रुथले बुहारी नै बनेर आफ्नी सासुको साथ निभाइन, त्यो अति नै प्रशंशायोग्यको छ। यसैले त स्त्रीहरुले रुथलाई सात भाई छोराभन्दा पनी असल भएकी, तपाईलाई प्रेम गर्ने तपाईकि बुहारी भनेर नाओमीसँग भनेका थिए। रुथ ४:१५ जब मोआबी रुथ आफ्नी सासुको साथ लागेर बेथलेममा आइपुगिन् तब त्यहाँ जौ को कटनी हुदैं थियो। शिला-बाला बटुल्न आफुलाई कसै न कसैले निगाहा गर्लान् भन्ने बिश्वासले जब रुथ खेतमा पुगिन त्यहि नै उनले आफ्नो बोअजलाई भेटिन्, त्यहि नै उनले आफ्नो लागी असल व्यक्ति भेटिन जसलाई परमेश्वरले उनकै निम्ति भनेर खटाउनुभएको थियो। जब रुथको कथा सुरु भएको थियो त्यो समयमा रुथ मोआबमा बस्थिन अनि बोअज यहूदाको बेथलेममा बस्थे। इस्रायलमा अनिकाल पर्नु, एक यहुदी परिवार मोआबमा बसाई सर्नु , रुथको बिबाह एक यहुदी सँग नै हुनु, बिबाह पश्चात पनी सन्तान नहुनु अनि तीनैजना पुरुषको मृत्यु हुनु र फेरी नओमीले दुख पाउनु अनि पुन आफ्नै देश फर्कने निर्णय गर्नु र आफ्नी सासुको साथ नछोड्ने निर्णय रुथले गर्नु, यी सबै रुथलाई उनको सहि व्यक्तिको सामु लेराउनको निम्ति परमेश्वरको योजना थियो भन्दा फरक नपर्ला। एक मोआबी स्त्री भएर पनी रुथले परमेश्वरमा विश्वास राखिन, अनी दुखको समयमा कति पनि बिचलित भईनन् तर परमेश्वरमा भरोसा राखिन। परमेश्वरप्रति रुथको यहि बिश्वासको कारण उनको जिबनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुभयो। रुथ आफ्नो जिबनको हरेक परीक्षामा पास भईन् र आफ्नो Mr. right लाई भेटाउन सफल भईन्। लामो कहानीलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा, त्यसपछी रुथ र बोअजले बिबाह गरे अनी उनीहरुको सन्तान भयो। तिनै सन्तान यिशैका पिता अनि दाउदका बाजे थिए जो योसेफका पुर्बज थिए जसको पत्नी मरियम थिइन् र यिनै मरियमबाट येशु ख्रीष्टको जन्म भएको थियो।
अत: आफ्नो बोअजको प्रतीक्षामा प्रतीक्षरत समस्त एकल दिदिबहिनीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, आफुले भनेकोजस्तो सोचेकोजस्तो युबकसँग बिबाह गर्न चाहनुहुन्छ भने जसरी रुथले इमान्दारिताको साथ बोअजको प्रतिक्षा गरिन, त्यसरी नै तपाइँ पनी आफ्नो बोअजको प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यो पर्खाइको घडीमा परमेश्वरमा आनन्दित हुनुहोस, उहाँमा रमाहट गर्नुहोस्। परमेश्वरले अबश्य पनी तपाइको मनोरथ पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सही व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई जोड दिनुभन्दा परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई हामीले जोड दिन सिक्नुपर्छ कारण असल व्यक्तिसँगको सम्बन्धभन्दा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कयौ गुणा ज्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ। परमेश्वरसँग बिताएका कुनै पनी समय कहिले पनी खेर जादैन। त्यो सधै आशिषमय हुन्छ। रुथले हिडेको बाटोलाई पछ्याउनु अबश्य पनी सजिलो छैन तर हाम्रो परमेश्वर हर क्षण हर समय हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो हरेक कदम-कदममा साथ चल्नुहुन्छ अनि एकदिन उहाँले तपाईलाई तपाईको बोअजसँग भेटाईदिनुहुन्छ। आफ्नो बोअजलाई चिन्न गल्ति नगर्नुहोस अर्थात हतारमा जो कसैलाई पनी आफ्नो बोअज नबनाउनुहोस र पापमा फसेर शैतानलाई मौका नदिनुहोस तर प्रतीक्षा गर्नुहोस जसरी रुथले गरिन्, अबश्य नै एकदिन तपाईको बोअज तपाईसामु उपस्थित हुनेछ। अनि त्यति बेला तपाई बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरको तपाईप्रतिको अन्नत प्रेम। तपाई जान्नुहुन्छ परमेश्वरको तपाईको जिबनप्रतिको सुन्दर योजना। तपाईले पाउनुहुनेछ परमेश्वरले तपाईको जिबनमा खन्याउनु चाहनु भएको आशिषको झरी। आमेन्!!
Tags: sermons Like 8 members like this
Comment by अरुणा राई ! on August 17, 2013 at 9:06pm बहिनी सृजना तपाईले बाँटनु भएको बिषय अति नै महत्व पुर्ण छ ! सबैको बीचमा बिबाहचाहिँ आदरणीय होस् ! प्रभुलाई चिन्न अघि प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने धारणा राखेर सबैले आफैलाई जे ठीक लाग्यो त्यस्तै किसिमको प्रेम गरीयो ! जो मन पर्यो उसैसँग भाग्यो ! जसलाई मन पर्यो उसैलाई भगायो ! आफ्नो ईच्छा अनुसारको जिवन साथी चुनेर बिबाहित सम्बन्धमा बाधिन्छौ अनि केहि साल पछि आफ्नै रोजाईमा पच्यताप गर्ने स्थीति मा पछितो गरेको हुन्छौ ! ! तर अब त्यसो होइन हामीले आफ्नु जिवन साथी पर्मेश्वरको ईच्छा अनुसारको चुन्नु परेको छ जसको निम्ती हामीले धर्यता गर्न पर्छ ! पर्मेश्वरको भय राख्न्ने जिवन साथी पाउन सक्योस् भनेर प्रतिदिन प्रार्थना गर्न पर्छ ! तपाईको यो बल्गले धेरै जवान युवा भाई बहिनीहरु आशिषित हुनेछ भन्ने मलाई पुर्ण बिश्वास छ ! Comment by Renu Bhandari on August 8, 2013 at 11:23am जयमशिह श्रीजना जी,तपाईको लेख एकदमै शिक्षमूलक लाग्यो साच्चिनै हरेकको लागि परमेश्वरले जोडि बनाइदिनु भएको छ तर हामी मनिसहरु आफ्नै बल र बुद्धिमा हिड्न खोज्छौ र परमेश्वरको ईच्छा विपरित जान्छौ अनि असफल हुन्छौ मैले धेरैको त्यस्तो देखेको छु । जति नै परमेश्वरमा परिपक्व भएपनि शैतानको पासोमा पर्न सकिन्छ र एक दिन आफु कमजोर भएमा लडिन्छ । त्यसैले यो लेख बाट धेरैनै शिक्षा लिन सकिन्छ । Comment by Shrawan Bomjan on August 5, 2013 at 4:58pm दिदि धेरै धेरै धन्यवाद मलाइ प्रष्ट पारि दिनुभएको लागि -यो सबै जान्न पाउदा म झन् खुशी भएको छु । परमेश्वरले हजुरलाई प्रसस्त आशिष दिनुभएको होस् । Comment by srijana gurung on August 5, 2013 at 2:29pm यहाँहरु दिनुभएको हौसला अनि प्रेरणाको लागी तपाईहरु सबै जनालाई धन्यबाद छ। हो नि अरुणा बैनी,अविश्वासीहरुमा त ज्ञानको अभाबले गर्दा पापको दलदलमा फसे तर प्रभुका छोरा छोरी भएर पनी कति विश्वासीहरु यस्तै गलत बाटोलाई रोज्छन।खैर,उनीहरुको लागी प्रार्थना गर्नुबाहेक अर्को बिकल्प हामी सँग छैन।उनीहरु सबैजनालाई हाम्रो प्रार्थनामा सम्झौ।
श्रबण भाई, तपाईको प्रतिबचनको लागी धेरै धेरै धन्यबाद छ। तपाई हामी बोअज़ को हुन् भनेर त जान्दछौ नै तर मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको चाही उनको सफा चरित्रको बारेमा हो। बाइबलमा थुप्रै थुप्रै परमप्रभुका दासहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ,जस्तो कि ; अब्रहाम जसले परमेश्वरमा भरोसा राखे र आफ्नै छोराको बलिदान दिन खोजेर परमेश्वरले लिनुभएको सबैभन्दा ठुलो परीक्षामा पास भए र उहाँको नजरमा विश्वासयोग्य र आज्ञाकारी ठहरिए। मोशा जसले परमेश्वरको आज्ञा मानेर मिश्रको दासत्वबाट इस्राएली हरुलाई छुटकारा दिएर महान उद्दारकर्ता साबीत भए। दाउद,जसले आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई पछाए। यद्दपी बोअज मात्र एक त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई बाइबलमा नजिकको छुटकारा दिने नातेदारको रुपमा चित्रित गरिएको छ।। पबित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार ,नजिकको छुटकारा दिने नातेदारको कर्तब्य निभाएर बोअजले हाम्रो प्रभु यशु ख्रीष्टको चरित्र आफ्नो जिबनमा उतारे। रुथ प्रती बोअजको प्रेम निस्वार्थ थियो र उनको लागी बोअजले गरेको हर त्यो कदमले नै प्रभु येशु ख्रीष्टको हामीप्रतिको प्रेम बुझ्न हामीलाई थप सहायता गर्दछ। किनभने जसरी ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै बोअजले रुथलाई प्रेम गरे-निस्वार्थ प्रेम। रुथ परदेशी थिइन् यसको बबुजत बोअजले उनलाई निगाह गरे र आफ्नो खेतमा शिला-बाला बटुल्न दिए। यतिमात्र नभएर बिटाहरुको बीच बिचमा पनि रुथलाई शिला-बाला बटुल्न दिनु भनि उनले आफ्ना मानिसहरुलाई आज्ञा दिए। यसरी बोअजले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे। मैले भन्न खोजेको आजको समयमा सबै मानिसहरु बोअज जस्तो सबै गुणहरुले परिपूर्ण हुदैनन् अर्थात् सबैजना बोअज हुदैनन् त नारीहरुले बोअज को हुन् र उसको पहिचान कसरी गर्ने त्यसलाई बुदाँगत रुपमा यसरी हेरौ;१) बोअज नारीहरुको सम्मान गर्दछ। आफ्नो सासुको आग्रह मानेर जब रुथ बोअजको नजिक गईन्,बोअज अचम्भित साथै रुथको अनुरोधसँग खुशी भए।रुथले गरेको अनुरोधको जुन उत्तर बोअजले दिए त्यहाँ रुथप्रति उसको सम्मान झल्किएको थियो। तिनले भने,''हे मेरी छोरी,परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिऊन्। .....तिमी जे चाहन्छ्यौ म गर्नेछु,किनभने तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भैसकेको छ।''रुथ ३:१०-११ अत: यदि कुनै व्यक्तिको बोलाइमा ब्यबहारमा नारीप्रति उसको सम्मान झल्कन्छ भने उ बोअज हो।२ ) बोअजले आफ्नो जिबनमा प्रथम स्थान परमेश्वरलाई दिन्छहुनसक्छ कसैले तपाईलाई प्रेम गर्दछ र उ तपाइलाई जतिखेर पनि म तिमीलाई माया गर्छु भन्दै अघिपछि हिड्ला तर बोअज सबै भन्दा बढी प्रेम परमेश्वरलाई गर्दछन र आफ्ना सम्पूर्ण भाबनाहरु परमेश्वरलाई बताउदछ।यसर्थ जो व्यक्ति परमेश्वरसँग बढी समय बिताउदछ नि:संकोच त्यो व्यक्ति बोअज हो।३) बोअजले बाह्य सौन्दर्य हेर्दैन जब आफ्नी सासुको आग्रह मानेर रुथ बोअजकोमा गइन् तब बोअजले खुशी हुदै रुथलाई भनेका थिए''अनी अब हे मेरी छोरी तिमि ढुक्क भएर बस।तिमी जे चाहन्छ्यौ म गर्नेछु,किनभने तिमी चरित्रवान् छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसहरुलाई थाहा छ।'' रुथ ३:११
अनि आदी इत्यादी.... :) यसर्थ रोमियो जुलियट भन्दा अगाडी ,लैला मजनु भन्दा अगाडी,सालिम अनि अनारकली भन्दा अगाडी रुथ र बोअज थिए,जसले परमेश्वरको सम्पूर्ण आज्ञा पालन गरेका थिए। सायद मैले तपाईलाई केहि मात्रमा भए पनी बोअजको अर्थ बुझाउन सके कि :) Comment by aruna chhantyal on August 5, 2013 at 12:08pm ani shrawan,tpi purus vaekole boazko thauma ruth rakhera padnus.kuro bujhin6 Comment by arun limbu on August 5, 2013 at 12:07pm जयमसिः दिदि बहिनिहरु बाट बचन सुन्नु र पढ्न पाउदा धेरै खुसि लग्यो
दिदि बहिनि हरु लाई सदा प्रम प्रभुले असिस देउन आमेन
Comment by aruna chhantyal on August 5, 2013 at 12:07pm ani shrawan,tpi purus vaekole boazko thauma ruth rakhera padnus.kuro bujhin6 Comment by aruna chhantyal on August 5, 2013 at 12:00pm dherai ramro sik6ya.yuwayuwatilai.maile chineko ekjana bswasi baini pni bibahit purusko premjalma fasin.ra aile unlai nilnu na okalnu vaeko 6.
Belaima sablai chetana hos. Comment by Anit pun on August 5, 2013 at 11:37am जय मसीह दिदी राम्रो वचन बाड्नु भएको रहेछ ।परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस। Comment by Shrawan Bomjan on August 5, 2013 at 7:43am यसपाली धेरै, कुराहरु दिदीहरुबाट भएर सिक्न पाउदा धेरै खुशी लागेको छ, होनी दिदि, हजुरले भने जस्तै जवान-जवानीले जीवन साथीको कुरालाई, उठाउने गम्भीरताको सहि नतिजालाई जान्नु आबस्यक छ, परमेश्वरको योजनामा भएर आफ्नो आफ्नो सहि छनोटलाइ जान्नु आबस्यक छ । धेरै धन्यवाद दिदि परमेश्वरको वचनबाट केहि शिक्षा सिक्ने मौका दिनुभएको लागि । मैले बोअजको अर्थ चाही अलिकति बुझेन - थोरै बुझाई दिनुभयो भने म प्रष्ट हुनेछु । RSS